UApple ubanga ukuba uSiri usetyenziswa yonke imihla kwizixhobo ezingaphezu kwezigidi ezingama-500 | IPhone iindaba
U-Apple ubanga ukuba uSiri usetyenziswa yonke imihla kwizixhobo ezingaphezu kwezigidi ezingama-500
Ngelixa kuyinyani ukuba iApple yenye yeenkampani zokuqala ukwenza umncedisi obonakalayo, kule minyaka idlulileyo, kubonakala ngathi iApple beka ecaleni iqonga Ukugxila kwezinye izinto, kwaye ukusukela ngoko uphuhliso lweSiri lukhubazekile, okanye kungcono lucothise.
Inguqulelo nganye entsha ye-iOS ethiwe thaca yiApple, iyangqina ukuba uSiri uye wakrelekrele, wenza ngakumbi, uluncedo ngakumbi ... kodwa njengoko ingxelo yokugqibela ifika kwintengiso, sijonga indlela kwakhona, USiri ngokuqinisekileyo ungumncedisi ofanayo ovela kwisandla se-iPhone 4s phantse i-7 kwiminyaka eyadlulayo.
Ngokuka-Apple, okwangoku I-Siri isetyenziswa ngabasebenzisi abangaphezulu kwezigidi ezingama-500, amanani athelekisa nenkqubela phambili anayo uSiri kule minyaka idlulileyo. USiri ngoku uyafumaneka kwi-iPhone, i-iPad, iPod touch, iApple Watch, iMacOS, kunye neApple TV. I-Apple ayivumeli abaphuhlisi benkampani yesithathu ukuba basebenzise uSiri, isigqibo esithintele umncedisi we-Apple ekubeni akwazi ukukhula nokukhulisa ukusebenza kwayo ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo.
Kude kube namhla, akukho mncedisi ungafunyanwa kwintengiso, nokuba kungo-Alexa, uMncedisi kaGoogle, uCortana okanye uSiri, uhlakaniphile ngokwaneleyo ukuba angakwazi ukuqhubeka neengxoxo ngexesha lokwenyani kunye nomsebenzisi, inqaku eliza kuthatha ixesha elide ukufika kwaye lifuna ixesha elininzi lokufunda kunye nentsebenziswano kubasebenzisi.
Ngokusungulwa kwePodPod yasekhaya, ukusetyenziswa kweSiri kuya kunyuka, kuxhomekeke kwinani lentengiso, njengomncedisi onyanisekileyo yeyona ndlela iphambili yonxibelelwano nesithethi sokuqala sika-Apple, isixhobo esinokuthi sinxibelelane naso, nangona ngendlela encinci, kunye nolawulo lokuchukumisa olubekwe ngaphezulu kwesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » U-Apple ubanga ukuba uSiri usetyenziswa yonke imihla kwizixhobo ezingaphezu kwezigidi ezingama-500
Siri ndicinga ukuba kufuneka ubeke iibhetri njengoko besitsho, kuba ineentsilelo ezininzi, kwaye ayitshintshi ilizwi kuphela, abancedisi abatsha baphuma kwaye uSiri uhlala efanayo.
Iikhonsepthi zokuqala ze-iPhone XI ziqala ukuvela
I-9x18 Podcast: Ukulinda kugqityiwe, iPod yasekhaya ilapha